यो हो कोभिड–१९ बारेको भ्रम र तथ्य : डा. सरोज गौडेल - Arthasansar
यो हो कोभिड–१९ बारेको भ्रम र तथ्य : डा. सरोज गौडेल
सोमबार, १९ पुस २०७८, १३ : ५९ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस महामारीले हाम्रो जीवन र सम्बन्धमा अकस्मात धेरै परिवर्तन ल्याइदिएको छ । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को कुन चरणमा अहिले हामी छौं भन्ने अनुमान कसैले गर्न सकेको छैन । अझै पनि हामी कोरोना महामारीको त्रासमै छौँ ।
कोरोना भाइरस के हो, त्यसबाट कसरी संक्रमण हुन्छ, कसलाई संक्रमणको बढी जोखिम छ, कोभिड–१९ लागेपछि मृत्युको सम्भावना कति छ तथा उक्त भाइरसबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा धेरै जनामा छ ।
यही विषयमा यहाँ हामीले कोरोना भाइरसबारे भ्रम र तथ्य के हो भन्नेबारे एभरेष्ट अस्पतालका फजिसियन डा. सरोज गौडेलको भनाई प्रस्तुत गरेका छौँः
कोभिड–१९ बारे नेपालमा अहिले पनि धेरै नै भ्रमहरु भेटिने गरिन्छ । जुन तथ्यहिन र प्रमाणबिहिन कुराहरु रहेका छन । जसमा अहिले कोभिड–१९ रोकथामका लागि लगाइने खोप एक भ्रमको केन्द्रविन्दु बनेको छ ।
हाल नेपालमा ४० प्रतिशत भन्दा बढिले पूर्ण खोप लगाइसकेको छन् । खोप लगाएका धेरै मानिसहरुले भन्ने गरेका छन् की मैले पूर्णरुपमा खोप लगाएको छु मलाई कोभिड–१९ संक्रमण हुँदैन भन्ने छ ।
र पछिल्लो समय धेरैले आफूलाई पहिले नै कोभिड–१९ को संक्रमण भैसकेको र दुबै मात्रा खोप लागाइसकेकोले आफूलाई कोभिडको जोखिम नहुने भन्दै सामाजिक दुरी पालना नगर्ने, माक्सको प्रयोग नगर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने र भिडभाड जन्ने प्रवृद्धि गर्ने र भिडभाडमा जाने जस्ता प्रविधिहरु भैरहेको पाइएको छ । यस्तो भ्रम जन्य कुराहरुको पछि नलागि अनिवार्य रुपमा माक्सको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दुरी कायम गर्ने गरौ किनकी अहिले कोभिडको जोखिम पहिले संक्रमित भएका बिरामीलाइ र दुबै मात्रा खोप लगाउनेलाई रोगबाट हुने गाम्हिर्यता कम देखिएता पनि पुन कोभिडको संक्रमण दोहोरीरहेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बच्ने उतम तरिका भनेको सामाजिक दुरी कायम गर्ने र माक्स, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र कोभिड विरुद्धको खोप नलगाएकाले खोप लगाउने नै अहिलेको समयमा कोभिडबाट बच्ने अत्ति उत्तम उपाय हो ।
नेपाल सरकारले पनि अब ५० प्रतिशतले खोप लागाइसकेपछि बुस्टर डोज लगाउने भनेको छ । बुस्टर डोज कोभिड विरुद्ध कतिको लाभ दायिक छ त ? किन बुस्टर खोप लगाउने त ? भन्ने कुरापनि आउन सक्छ ।
कोभिड १९ संक्रमण हुनको लागि स्वाद नै हराउन पर्छ नाकले गन्ध थाहा पाउनै छाड्न पर्छ भन्ने हुँदैन । कोभिड १९ विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेको भयता पनि उनीहरुलाई संक्रमण देखिन सक्छ ।
त्यस्तै, हामी बर्षेनी भाइरल इन्फुइन्फलुन्जा भ्याक्सिन लगाउछौँ । त्यो भ्याक्सिनले हामीलाई मौसमी रुघाखोकी ज्वरोबाट बचाउँछ । यस्को फाइदा के छ भने हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, कोभिडको सुरुवाति चरण भनेकै मौसमी रुघाखोकी र ज्वरो हो । यो खोप लगाएसि मौसमी रुघाखोकी र ज्वरो मात्र कम भयो भने कोभिडको डर र भयबाट बच्न सकिन्छ ।